Fehikibo tompon-daka 10 ratsy indrindra amin'ny tantaran'ny tolona - Wwe
Fehikibo tompon-daka 10 ratsy indrindra amin'ny tantaran'ny tolona
DISCLAIMER: Ny fehikibo dia laharana arakaraka ny fijeriny irery fa tsy laza, tompon'andraikitra sns.
Raha milaza fa ny fanehoan-kevitr'ireo mpankafy ny fehikibo WWE Universal Championship nisokatra tamin'ny SummerSlam taona vitsy lasa izay, dia mety ho fanakorontanana izany. Na i Seth Rollins aza nananatra ny mpihaino an'i Brooklyn avy eo tamin'ny alàlan'ny Twitter. Masiaka be ny fanehoan-kevitra ka re ny vahoaka nihira momba ny fehikibo Universal Championship ho an'ny ankamaroan'ny lalao Finn Balor sy Seth Rollins tamin'ny SummerSlam.
ny olon-tiana tsy te handany fotoana miaraka amiko
Izany dia nampatsiahy ny fehin-kibo tompon-daka faran'izay ratsy rehetra nananantsika tamin'ny tolona nandritra ny taona maro, koa eto ny lisitry ny fehikibon'ny fikomiana 10 ratsy indrindra tamin'ny fotoana rehetra.
Mba ho ara-drariny, miaraka amin'ny ankamaroan'ny fehikibo WWE ankehitriny, dia azontsika atao ny mametaka azy ireo amin'ny Tompondakan'i Universal.
Hanatontosa ilay fiadiana ny tompon-daka amin'ny WWE Universal Championship ve?
10: Tompondakan'ny WWE Divas
Ny fehin-kibo Championship Divas dia iray amin'ireo fehikibo ankahalain'ny olona indrindra tamin'ny tantaran'ny WWE farany teo
Atombotsika amin'ny lisitra 'Butterfly belt' malaza ity lisitra ity. Nandritra izay valo taona nijoroany izay, ny Tompondakan'ny WWE Divas no fehin'ny tompondaka ankahalaina indrindra tamin'ny tantaran'ny WWE farany teo. Ankafizin'ny saika ny andro nampidirana azy, ny fehikibo dia manana lolo mavokely amin'ny lovia lehibe sy ny teny divas voasoratra eo amboniny.
Na dia nitazona izany aza ny vehivavy toa an'i Paige sy Nikki Bella, io fehikibo io dia tonga hanamarika vanim-potoana iray izay tsy niraika firy tamin'ny ady amin'ny vehivavy ny WWE, nanasonia ny vehivavy imbetsaka ny fisehoany fa tsy ny fahaizany.
9: Tompondakan'ny Fahitalavitra ROH
Ity fehikibo ity dia toa an'ny mozea
Ny Championship of the Television of the Ring of Honor dia voalohany tamin'ny taona 2010, ary ny anaram-boninahitra faharoa an'ny ROH dia notazonin'ireo tia an'i Sami Zayn, Tommaso Ciampa, Jay Lethal, ary Adam Cole. Ity kinovan'ny fehin-kandresin'ny tompondaka ity dia natolotra tamin'ny 2012 ary toa mahatsiravina fotsiny.
Toa dikan-teny ratsy vita amin'ny fehin-kibo 80 an-tampony ity fa vita ratsy fotsiny ary mijery efa lany andro. Ankoatr'izay, ny endrika hafahafa dia toa tsy fantatra intsony rehefa manodidina ny andilan'ny mpiady.
8: Tompondakan'i WWE i John Cena
Iza no nihevitra fa ny fehin-kibo lohateny mihodina dia hevitra tsara?
wwe paige sy xavier ala
Amin'ny fotoana rehetra anaovanao fehikibo fiadiana ny tompondaka mifototra amin'ny gimikan'ny mpiady iray manokana dia miafara amin'ny olana izany. Amin'ity tranga ity, olana ratsy io, ara-bakiteny.
Ny fehikibo nataon'i John Cena izay niady tamin'ny WWE Championship dia nahazo fankahalana be dia be avy amin'ireo mpankafy nandritra ny taona maro ary ara-drariny izany. Na dia mifanaraka amin'ny gimik rapper an'i Cena aza ilay fehikibo tamin'izany fotoana izany dia toa mampihomehy ilay fehikibo isaky ny nitana azy io ny mpiady iray hafa. Ny ampahany mihodina dia ilay ampahany nahatonga ny fehikibo ho ratsy tarehy, hoy ianao? Eny, WWE dia nanakana azy tsy hihodina amin'ny fotoana iray, ary vao mainka nihomehy kokoa izy tamin'izay.
7: Titre World's Rated-R an'ny Edge
Ity iray ity dia iray amin'ireo fehikibo lozisialy WWE ratsy indrindra tamin'ny fotoana rehetra
Ny lohateny fihodinana faharoa amin'ity lisitra ity, ity fehin-kibo ity dia manaporofo fotsiny ny fahagagana hafahafa nananan'i WWE tamin'ny fehikibo lohateny nandritra ny vanim-potoana tsy nisy herisetra nataon'i Ruthless - hevitra iray hafa lehibe avy amin'ny Vincent Kennedy McMahon, ilay hevitra mitovy ihany izay nitondra antsika Mae Young niteraka tanana ary ny Ady ho an'ny rehetra.
Ity fehikibo ity dia karazana kinova novaina tamin'ny fehikibo misy an'i Cena ary nanana logo Edge's Rated-R izy fa tsy ny logo WWE. Ny fehikibo dia nijery fotsiny fa ratsy tarehy tokoa ary fehikibo toa an'io izay misy gimikick'ny mpiady amin'izy ireo dia tsy manana fahatokisana na inona na inona. Midika izany fa io fehikibo io dia tsy nanana akory ny sary famantarana WWE teo amin'ny lovia lehibe.
6: Tompondakan'ny FTW an'ny Taz ao amin'ny ECW
Ny fehin-kibo FTW no fehin-kibo ratsy indrindra ECW novokarina
Taz dia nampiditra ny FTW Heavyweight Championship tamin'ny 1998 rehefa tsy afaka nitifitra tamin'ny Championship ECW izy rehefa niverina avy naratra. Niaro ny Tompondakan'ny FTW Heavyweight Taz i Taz raha nanondro ny tenany ho tompon-daka eran-tany 'tena'. Ny fehikibo dia mijoro amin'ny ligy mitovy amin'ny Million Dollar Championship ho anaram-boninahitra tsy fantatra ofisialy.
Mazava ho azy faingana no nanaovana ny fehikibo niaraka tamin'i Taz naka anaram-boninahitra taloha ary handeha hiasa aminy amin'ny fampiasana kasety sy marika. Ny lohateny dia tsy toa hoe manana laza ambony, zavatra izay tolon'ny mpikomy mba handresy.
ny fomba fanamboarana aorian'ny ady
Nahoana no tezitra ny vadiko dia ny fotoana rehetra
ahoana no ilazana amin'ny olona ny zavatra tsapanao
fanafihana amin'ny fahafatesan'i titan erwin